जनउत्थान सामूदायिक लघुवित्तको लाभांश पारित, २ सय प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने - Aarthiknews
विहीबार, २२ साउन २०७७ Thursday, 06 August, 2020
आइतबार, २८ असार २०७७
काठमाडौं । जनउत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शनिवार नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरि प्रस्तावित २६ दशमलव ३२ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ । बुटवलमा सम्पन्न सभाले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट प्रस्तावित २५ प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव ३२ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको हो । साथै सभाले २५ प्रतिशत बोनस शेयरपश्चात कायम चुक्तापूँजीको २ सय प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी ६ करोड ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । सोहि पूँजीको आधारमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको कम्पनीले बोनस पश्चात कायम हुने चुक्तापूँजी ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँको १ बराबर २ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको हो । यस कम्पनीले अन्य कुनै उपयुक्त लघुवित्त कम्पनीसँग मर्जरमा जाने वा प्राप्ती गर्ने विषयलाई पनि अघि सारेको छ । यदि उपयुक्त कम्पनीसँग मर्जर तथा प्राप्ती गर्ने भएको खण्डमा आवश्यक सम्पूर्ण जिम्वेवारी सञ्चालक समितिलाई दिने निर्णय समेत सभाले गरेको छ । नवौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले चैत १४ गते एक दिन बुक क्लोज गरेको छ । यस आधारमा असार १३ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरु लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सोहि सभाले पाँच सञ्चालन निर्वाचन पछि अध्यक्ष समेत चयन गरेको छ । संस्थापकतर्फबाट तीन जना र सर्वसाधारण तर्फबाट दुई जना गरि पाँच सञ्चालक सभाले निर्वाचित गरेको हो । निर्वाचित सञ्चालकहरुमा बाबुराम विश्वकर्मा , रेवन्त बहादुर विश्वकर्मा, मान बहादुर विश्वकर्मा, गोकर्ण बहादुर कार्की क्षेत्री र नरेन्द्र कंडेल रहेका छन् । शनिवारनै सभा पश्चात बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले दोस्रो कार्यकालका लागि बाबुराम विश्वकर्मालाई अध्यक्ष पदमा चयन गरेको छ ।
समाज लघुवित्तले पायो आईपीओ बिक्री गर्ने अनुमति
शेयर बजारमा २१ अंककाे गिरावट
सोल्टी होटलको बोनस शेयर सूचीकृत
सोल्टी होटलको बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
साधना लघुवित्तको साधारण शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
नेप्सेको अनलाइन नेटवर्किङ प्रणाली समस्यापछि खुलेको बजारमा १७ अंकको गिरावट
सञ्चार माध्यमलाई नवीकरण तथा जरिवाना छुट दिइने
मास्क नलगाउनेलाई कारबाही, संस्थाले सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गरे सञ्चालकलाई कारबाही
सवारीसाधन सञ्चालनमा पुनः जोर विजोर प्रणाली लागू
स्थानीयको सुझाव रानीपोखरीमा आकाशे पानी सङ्कलन केन्द्र बनाउऔं
माइक्रोसफ्टले टिकटक किन्न लागेपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिले कमिसन मागे !
कोरोना भाइरसका कारण एकै दिन ५ जनाले ज्यान गुमाए
७१.६ प्रतिशत उद्योग व्यवसायले ब्याज छुटको सुविधा पाएनन्
''८० प्रतिशत ऊर्जा गैर–व्यवसायिक क्षेत्रमा उपयोग भयो''
कोरोनाका कारण काठमाडौंमा ६५ वर्षीया महिलाको मृत्यु
नबिल बैंकको नायब महाप्रवन्धकमा मनोज ज्ञवाली
मध्यराति प्रम र प्रधानन्यायाधीशबीच यस्तो कुरा भएकै हो त ?
तीन जनाको उपचारका क्रममा मृत्यू, काेराेना लक्षण देखिएपछि अन्तिम संस्कारमा रोक
काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का महसूस
‘भविष्यमा बैंकहरूले स्टाफहरू सहजै घटाउन पाउनु पर्छ’
लेबनानको राजधानी बेरुतमा विस्फोटः ७० जनाको मृत्यु, चारहजार भन्दा बढी घाइते
सनराईज बैंकमा कार्यरत एक कर्मचारी मृत अवस्थामा भेटिए
मंगोलियाले ११ टन सुन किन्यो
४६ किलोवाटको विद्युत् उत्पादन हुँदै
निगमले जुलाई ३१ तारिखदेखि उद्धार उडान गर्ने